कोभिडसँग लड्ने क्षमता विकासका लागि कस्तो खाने ? यस्तो छ विज्ञहरुको सुझाव – Clickmandu
कोभिडसँग लड्ने क्षमता विकासका लागि कस्तो खाने ? यस्तो छ विज्ञहरुको सुझाव
क्लिकमान्डु २०७७ कार्तिक २ गते १६:३३ मा प्रकाशित
वीर अस्पतालमा संक्रमितले खाने खाना
कोभिड संक्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लडने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि दैनिक गतिविधि र खानपिनमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दएका छन् ।
आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइरालाले खाने कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार तेलमा तारेर बनाइएको परिकारहरु कम खानुपर्ने हुन्छ ।
बजारमा पाइने चिल्लो, सुकिलो र सफा देखिने खाद्य वस्तुहरुमा बढी विषाक्त प्रयोग भएको हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुहरुको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्न समेत उनको सुझाव छ । त्यस्तै ब्रोइलर कुखुराको मासु धेरै नखान समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
ब्रोइलर कुखुरामा धेरै एन्टिबायोटिक प्रयोग भएको र जेनेटिक मोडिफाइड समेत भएकाले बोइलर कुखुराको मासुको कम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै खसीबोकाको मासु पनि कम खानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसका साथै कोल्ड ड्रिग्सलगायत पेय पदार्थको समेत कम प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । उनले दिनका एकदुई वटा कागतीको सेवन गर्ने, पुदिना, भाङ, तिललगायतका बाट बनाइएको अचार तथा चटनी खाने बानिले रोगब्याधि कम गराउने बताए ।
त्यस्तै धेरैप्रकारका मल प्रयोग भएका सागसब्जी, तरकारीहरुको प्रयोग नगर्न समेत उनले सुझाव दिए । सादा खाना खान र सरिरभित्र कुनैपनि प्रकारको भार नपर्नेगरी खानपनि उनको सुझाव छ ।
शुद्ध पानी धेरै पिउने, गुर्जो, उमारेको जमरा, कागति लगायतको सेवन गर्नु उपयुक्त हुने पनि उनको तर्क छ । त्यसबाहेक नियमित व्यायाम गर्दा समेत सरिरमा फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
योगा, खानपिन, आयुर्वेदका जडिबुटी र मनोविज्ञानका पक्षहरुमा सबैधन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
भाइरोलोजिस्ट डा. बाबुराम मरासिनीले दशैंका बेला सहर बजारबाट आफ्नो घरमा जाँदा विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव दिए । दशैंमा घर नजान भन्दा पनि घर गएपछि संक्रमणबाट जोगिनका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
घरमा गएपछि परिवारका सदस्यसँग घुलमिल हुन भन्दा अलग्गै बस्नुपर्नेमा जोड दिए । खाना खाँदा दुरी कायम गर्ने, दशैंमा टिका लगाउँदा खुल्ला ठाउँमा लगाउने, भिडभाड नगर्ने हो भने रोग लाग्नबाट बच्न र बचाउन सकिने डा. मरासिनीको भनाइ छ ।
अब चन्द्रजी नै महासंघको स्वतः अध्यक्ष हो, चण्डीले जसरी हटाउने गेम खेल्दैनौंः पशुपति मुरारका
रजिस्टर्ड अडिटर्स प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट टास्क फोर्स’को प्रतिवेदनमा आइक्यानले जनायो बिमत्ती
सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सदस्यहरुले गरे सार्वजनिक, प्रतिवेदनसहित
प्रदेश नम्बर १ सरकारले इलाममा फिल्म हल बनाउने
अब किसानको उत्पादन सडकमा पोख्नुपर्ने, नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छः मन्त्री अर्याल
एमसीसी छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन हुनुपर्छ, सधैका लागि खुला छैनः एमसीसी